Izindaba - Umehluko phakathi kwe-induction cooker ne-infrared cooker
Umehluko phakathi kokupheka kokungeniswa nokupheka kwe-infrared
Umgomo wokusebenza wompheki we-infrared: ngemuva kokushisa isikhungo sokushisa kwesithando (i-nickel-Chromium yensimbi yokushisa yensimbi), yakha kahle kakhulu eduze kwe-infrared ray. Ngokusebenza kwe-microcrystalline surface plate, kukhiqizwa imisebe ephezulu kakhulu ye-infrared. Intambo yomlilo iqonde phezulu, futhi ukuhlushwa kokushisa kufafazwa ngqo ezansi ebhodweni, ukuze kufezekiswe umphumela wokushisa.Ngamagama afanayo, ucingo lokumelana lubekwa ngaphansi kwembiza. Intambo yokumelana ixhunywe ocingweni bese iba bomvu, ikhiphe ukushisa. Ukushisa kunikezwa ebhodweni ukufeza umphumela wokushisa.
Isimiso sokusebenza sompheki wokungeniswa: ukushintshana kwamanje kusetshenziselwa ukukhiqiza amandla kazibuthe ashintshanayo ngesiqondiso esishintsha njalo ngekhoyili. I-Eddy yamanje izovela ngaphakathi komqhubi kunkambu kazibuthe eshintshanayo. Umphumela wokushisa we-Joule wamanje we-eddy uzokwenza ukuthi umqhubi afudumale, ukuze abone ukufudumeza.Iphuzu elidumile, umphumela oqondile wokungeniswa kwamandla kagesi ebhodweni, imbiza uqobo lwayo, ukufezekisa indima yokushisa ukudla.
Umehluko owodwa: Kusebenza ebhodweni.
I-infrared cooker idlulisela ukushisa ngqo ebhodweni, ngakho-ke ibhodwe lingenziwa ngezinto ezahlukahlukene, ngokuyisisekelo alikho ibhodwe, noma iyiphi imbiza engasetshenziswa.
I-induction cooker iyimbiza ekufakweni kwe-electromagnetic ngaphansi kokushisa, uma ibhodwe elinempahla lingakwamukeli indima yamandla kazibuthe, ukufudumeza akusekho embuzweni, ngakho-ke umpheki unemingcele, angasebenzisa imbiza kazibuthe, njenge-iron imbiza.
Umehluko 2: Izinga lokushisa.
I-infrared cooker ishisa kancane ngoba ishisa into yokushisa, bese idluliselwa ebhodweni.
I-induction cooker isivele iqale ukwenziwa ngogesi, imbiza kazibuthe izokhula ukushisa, ngakho-ke ijubane lishesha kakhulu kunesithando somlilo kagesi.
Ngakho-ke ekusetshenzisweni kwenqubo, ibhodwe lokupheka lithambekele kakhulu ekukhetheni i-induction cooker, ngoba ukufudumeza kuyashesha.
Umehluko 3: umphumela wokushisa njalo.
Isithando somlilo kagesi sinomsebenzi wokulawula ukushisa oqondile, ozonciphisa amandla lapho ufinyelela izinga lokushisa elithile, ngakho-ke umphumela wokushisa njalo ungcono.
Isithando somlilo sokushisa ukufudumeza ngezikhathi ezithile, kushisa kakhulu, kusondele, kuqhubeke nokushisa, ngakho-ke umphumela wokushisa okungaguquki awumuhle.
Ngakho-ke, ubisi olushisayo lukhetha isitofu sobumba sikagesi kungcono.